Liiska oo Dhamaystiran OST Gal Khaladaadka iyo Dhibaatooyinka
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Liiska Khaladaadka oo Dhameystiran
Exchange OST Gal Khaladaadka iyo Dhibaatooyinka
Liiska oo Dhamaystiran Khaladaadka iyo Dhibaatooyinka Kala Beddelka OST files
Markaad isticmaasho Microsoft Outlook si aad u furto a musuqmaasuq or agoon galka khad la'aanta ah (OST) feyl, ama la waafaji isweydaarsiga serverka, waxaad la kulmi doontaa fariimo kala duwan oo qalad ah, kuwaas oo kugu yara wareeri kara. Sidaa darteed, halkan waxaan isku dayi doonnaa inaan soo taxno dhammaan khaladaadka suurtagalka ah, oo loo kala sooco iyadoo loo eegayo inta jeer ee ay dhacaan. Khalad kasta, waxaan ku sharixi doonnaa astaamihiisa, sharxi doonaa sababtiisa saxda ah waxaanan siin doonaa xalka, si aad si fiican u fahmi karto. Hoos waxaan ku isticmaali doonaa 'filename.ost'si aad u muujiso is-weydaarsigaaga khaldan OST Magaca faylka.
Ma furi karo galka emailkaaga caadiga ah. Faylka xxxx.ost maahan feyl fayl qadla'aan ah."
Waan awoodin inuu balaariyo galka. Xirmooyinka galka lama furi karin. Khaladaadka waxaa lagu ogaan lahaa feylka xxxx.ost. Jooji dhammaan codsiyada ku shaqeeya boostada, ka dibna isticmaal Qalabka Dayactirka Sanduuqa."
La kulan tiro badan oo ah waxyaabaha isku dhaca.
Ma furi karo walxaha gaarka ah ee Muuqaalka marka qad la'aanta.
Khaladaad kala duwan markii aad u waafajinaysid sanduuqa sanduuqa Sarrifka ee bartaada OST gudbiso.
Waxaa intaa dheer, markaad isticmaaleysid galka qadka ()OST) ku xareeso Microsoft Exchange server, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa dhibaatooyinka soo socda si isdaba joog ah, oo lagu xallin karo DataNumen Exchange Recovery si fudud.
E-mayllada iyo walxaha kale ee ku jira sanduuqa isweydaarsiga ayaa si khalad ah loo tirtiray.
Beddel Beddel OST faylka faylka Muuqaalka PST
Sarrifka ayaa hadda ku jira qaab soo kabasho.
Adkeysey OST dhibaatada file (OST cabirka faylka wuxuu gaarayaa ama dhaafayaa xadka 2GB).